गर्भावस्था को पाँचौ हप्ता - एक शब्द अक्सर आउन जो संग gynecology मा दर्ता गर्न। सामान्यतया, यो अवधि मा महिनावारी ढिलाइ - छैन 14 भन्दा कम दिन, र अब यसलाई मौका गर्न श्रेय गर्न सकिँदैन। सामान्यतया यो समय नै स्पष्ट विषाक्तता को संकेत प्रकट गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यसलाई विशेष गरी सुखद क्षण हो भनेर भन्न सक्दैन, तर यो पहिलो trimester छ। डाक्टर अक्सर कुनै पनि शङ्का समाधान र निदान गर्न पहिलो सर्वेक्षण महिलाहरु उल्लेख त्यसैले गर्भावस्था को5सप्ताह त्यो अल्ट्रासाउंड, यो विशेष अवस्थामा पहिलो वृत्तचित्र प्रमाण छ।
जहाँसम्म अल्ट्रासाउंड यो अवधि मा आवश्यक छ रूपमा
डाक्टर सामान्यतया सर्वेक्षण भविष्यमा आमा पठाउन हतार छैन। शब्द अझै पनि धेरै साना, र बिल्कुल आवश्यक5सप्ताह गर्भवती छैन लागि अल्ट्रासाउंड गर्न छ। तर, कहिलेकाहीं धेरै अधीर आमाहरु आफूलाई आज तपाईं विशेष गरी एक शुल्क आधारमा कुनै पनि क्लिनिक जाने गर्न सक्ने सर्वेक्षण मा लिपिबद्ध छन्। सबै को सबै भन्दा जसले गर्भावस्था लागि प्रतीक्षा र साँच्चै आमा बन्न कि थप पुष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ गरिएको छ महिलाहरु को श्रेणी सम्बन्धित छ। यस्तो छोटो समयमा अक्सर एक डाक्टर एक महिलाले गर्भावस्था समाप्त गर्न चाहन्छ भने, एक अल्ट्रासाउंड पठाउँछ। त्यसैले, तपाईं, कुनै आक्रान्त, गंभीर दुखाइ चिन्ता छैन भने, यो राम्रो किनभने यो अवधि मा अनुसन्धान पनि महत्वपूर्ण नहुन सक्छ, एक बिट प्रतीक्षा छ।
यो अवधि मा गर्भाशय के हो
बाह्य, को expectant आमा अझै पनि उनको साथीहरूबाट विभिन्न कुनै छ, तर चमत्कार पहिले नै यो भित्र ठाउँ लिन थालेका छन्। पहिलो को गर्भाशय नै परिवर्तन। राम्रो उपकरण संग बाहिर भने गर्भावस्था को अमेरिकी5सप्ताह मात्र पुष्टि। तथापि, एक अनुभवी डाक्टर गर्भाशय नै वृद्धि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 1 सेमी भन्दा ठूलो भ्रूण थैली भित्र स्थित छ किनभने यो, सामान्य हो, तर, यो वृद्धि unevenly अर्थात् जहाँ भित्र गर्भाशय भ्रूण संलग्न छ छेउमा, यसको उभडा हुन्छ हुन्छ।। गर्भावस्था को5सप्ताह मा अल्ट्रासाउंड पनि सूचनात्मक छैन, त्यसैले राम्रो उपकरण साथ काम गर्ने पनि अनुभवी विशेषज्ञ, तपाईं एक आमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक धेरै भन्न सक्दैन। तपाईंले केही समयमा जूम रूपमा उहाँले निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ र पहेंलो भाग SAC र भ्रूण नै। यसबाहेक, यस समयमा बच्चालाई हृदय पिटाई सुरु हुन्छ। साथै, ovary यो अवधि मा, अन्डा जो देखि यो अझै पनि प्रारम्भिक गर्भावस्था को एक संकेत छ जो देखिने भएको कर्पस luteum, आए।
के मनिटर देखिएको छ
यो एक महिला त्यहाँ तीन-आयामी अल्ट्रासाउंड लागि विशेष उपकरण छ जहाँ एक विशेषज्ञ क्लिनिक, मा अल्ट्रासाउंड बित्दै सधैं छैन। तर विशेषज्ञ बाहेक सामान्य मिसिन कसैले मा उहाँले स्क्रिनमा के देख्नुहुन्छ बाहिर गर्न सक्षम हुने छैन। त्यसैले हामी डाक्टर को अनुभव मा भरोसा छ। गर्भावस्था को5सप्ताह मा अल्ट्रासाउंड नै तपाईं अझै पनि एउटा सानो tsilind धेरै समान छ जो भ्रूण, हेर्न अनुमति दिन्छ। यसको लम्बाइ - पाँच मिलिमिटरमा, र केवल 3.5 ग्राम वजन। तर, त्यो अझै पनि एकदम सानो छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो भित्र त्यहाँ पछि विकास निर्धारण महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू छन्। कसले तन्त्रिका ट्यूब गठन, श्वसन प्रणाली, कलेजो र अग्न्याशय राखे पछि पुरुष र महिला रोगाणु कक्षहरू विकास हुनेछ कक्षहरूको गठन छ। मनिटर मात्र होइन पुच्छर र टाउको, तर पनि हतियार र खुट्टा, को औंलाहरु र आँखा को शुरुवात देख्न सकिन्छ। ट्याप पहिलो हार्टबिट सानो मान्छे एक विशेष सेन्सर प्रयोग गरेर।
अमेरिकी5obstetric गर्भावस्था सप्ताह तपाईं पहिलो माप बनाउन र भ्रूण राम्ररी विकास भएको छ कि छैन भनेर लगभग निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। तेल-Parietal यो जन्म मा बच्चा को वजन गणना गर्न सम्भव हुनेछ भन्ने आधार मा भ्रूण को आकार मापन। डाक्टर को गर्भाशय मा भ्रूण, को स्थिति मूल्याङ्कन गर्नेछ निश्चित हुन myometrium टोन, अवस्था र डिम्बाशय कर्पस luteum। यस मामला मा, मनिटर मा डाक्टर मा वृद्धि देखेर छ को गर्भाशय को आकार, एक अन्डा को फारममा। यो विषमता कारण endometrium को मोटाई मा एक fertilized अन्डा को आरोपण देखिन्छ।
5 हप्ता - अचम्मको के डाक्टर गर्दा गर्भावस्था अवधि बच्चालाई बारेमा पाउन सक्नुहुन्छ। अल्ट्रासाउंड को चिकित्सक सक्रियतासाथ भ्रूण सार्न कसरी एक निष्कर्षमा पुग्न गर्न अनुमति दिन्छ। यो मुटुको दर साथ सँगै यसको आन्दोलन फ्रिक्वेन्सी यसको जाँगरको र स्वास्थ्य को पहिलो टर्मिनलहरु गर्न अनुमति दिन्छ। अब भ्रूण कुनै यातायात हो भने, डाक्टर गर्भपतन को मुद्दा गर्नेछन्। अझै पनि प्रतीक्षा र अर्को परीक्षा मा दर तुलना गर्न केही हप्ता छ, तर यो पहिले नै अलार्म Bells छ।
के महत्त्वपूर्ण छ expectant आमा जान्न
अमेरिकी 4, गर्भावस्था को5सप्ताह सधैं तथापि, यो अवधि छ के सामान्यतया एक महिला त्यो गर्भवती छ थाह छ। त्यसैले, यो एक गर्भवती महिला द्वारा अनुगमन गर्न भ्रूण विकास सुविधाहरूको बारेमा साथै नियम मा थाहा महत्त्वपूर्ण छ। सबै को पहिलो, यो अब तन्त्रिका ट्यूब को गठन भइसकेपछि छ सम्झना। तपाईं आफ्नो बच्चाहरु स्वस्थ, शान्त र हँसिलो जन्म भएको थियो चाहता हूँ? त्यसपछि सबै ख्याल राख्नुहुन्छ र चिन्ता, साथै सबै भन्दा रूपमा हर्बल चिया सुखदायक कुनै पनि पेय छोड्नुहोस्। हामी फोलिक एसिड, को स्नायु प्रणाली को उचित विकासको लागि आवश्यक हो जो बिर्सनु हुँदैन। तपाईं ध्यान दिएर आफ्नो स्वास्थ्य निगरानी गर्न आवश्यक छ जब साथै, यो अवधि छ। साधारण चिसो गम्भीर असामान्यताहरु हुन सक्छ छ रूपमा यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै लागूऔषधको स्वीकृति, निषेधित छ भ्रूण विकास। यो यस कारण लागि, डाक्टर पहिलो अल्ट्रासाउंड फोटो के तपाईं निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको छ। गर्भावस्था को5सप्ताह - एक अवधि यो बच्चा स्वास्थ्य सोच्न सबै आवश्यक पहिलो, यो प्रक्रिया गर्न क्षति साबित भएको छैन भनेर गरिएको तथ्यलाई बावजुद हुँदा, यो जोखिम कम गर्न आवश्यक छ।
राय र समीक्षा आमा expectant
सामान्यतया, यो सर्वेक्षण महिला कुनै पनि विशेष भावना पैदा गर्दैन। गर्भावस्था को अमेरिकी5obstetric सप्ताह कुनै पनि डाटा यातायात छैन बोक्न गर्दैन। बारेमा पनि नभएसम्म डाक्टर देख्ने सबै, तपाईं यसको विकास पारित गर्न भविष्यमा बच्चा वा कसरी क्षेत्रमा कुनै पनि फेला पार्न हुनेछ। तर, डाक्टर एक वास्तविक विशेषज्ञ, साथै एक दयालु र विचारशील मानिस हुनेछ भने उहाँले तपाईंलाई यो चरण मा भ्रूण को विकास को peculiarities, कि सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रमुख कोसेढुङ्गामा बारेमा धेरै बताउन सक्छ। यो एक परीक्षण अस्थानिक गर्भावस्था निकाल्न र कहाँ यो हुनुपर्छ भ्रूण ठीक विकास हुन्छ भनी स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। तर एक keepsake फोटो बनाउने बेला हतार छैन। अमेरिकी गर्भावस्था को5सप्ताह त आफ्नो परिवार एल्बममा अस्पष्ट अंक तपाईं खुसी धारीदार पृष्ठभूमि बनाउन असम्भाव्य छ, एउटा धेरै योजनाबद्ध देखाउँछ। तपाईंले अझै पनि crumbs कब्जा गर्न पर्याप्त समय र अवसर हुनेछ।
गर्छ अल्ट्रासाउंड यो अवधि लागि हानिकारक छ?
वास्तवमा, पूर्ण विश्वास तपाईंलाई यो प्रश्न कुनै एक जवाफ हुनेछ। धेरै घटक। हालसम्म त्यहाँ प्रक्रिया को भ्रूण लागि हानिकारक छ भन्ने पुष्टि भनेर कुनै विश्वसनीय डाटा छ। तथापि, गर्भावस्था को5सप्ताह मा अल्ट्रासाउंड बनाउन चाहे कुरा, यो कि यो प्रक्रिया राम्रो कारण बिना निर्धारित छैन उल्लेख गर्नुपर्छ। यो सबैभन्दा रोगी उजुरी (दुखाइ, बेचैनी, रक्तस्राव) वा डाक्टर संदिग्ध हुन सक्छ। र आमा को लागि जोखिम हटाउन, एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक अल्ट्रासाउंड पठाउन सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, कुनै पनि भुक्तानी क्लिनिक मा तपाईं पनि एक सान्दर्भिक बिना, तपाईंले एक चिकित्सा गर्भपतन लागि जाँदैछन् भनेर भन्न विशेष गरी यदि गर्नेछ।
तर, चिकित्सा सर्कलमा समय समयमा चाहे अमेरिकी सर्वेक्षण गर्भावस्था को प्रारम्भिक हप्तामा बाहिर छ भने भ्रूण गर्न हानि ल्याउन सक्दैन को प्रश्न उठायो। यस्तो जानकारी, भविष्यमा आमा सामना र डाक्टर एक सर्वेक्षण नियुक्त गर्दैन भने त आफूलाई, यस्तो प्रक्रिया को wary सुरु, यो छुँदै नछुने राम्रो छ।
सम्भव pathologies को पहिचान
शायद सबै महिला कि अमेरिकी5सप्ताह गर्भवती कुनै पनि बच्चा malformations लागि देखाउने को प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ। वास्तवमा, यो यसकारण, यो अवधि मा अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया सानो छ कि विचार, असम्भाव्य छ। यो यो असहयोगी छ अर्थात् कि, छैन साबित छ, यो हानिकारक छ भन्ने पनि हो। त्यो यो प्रक्रिया बिना गर्न एकदम सम्भव छ, एक महिला चिन्ता छैन भने छ। तर तपाईंले पहिले नै कुनै पनि दोष र विकार अवलोकन भने, डाक्टर सकेसम्म अमेरिकी पारित गर्न प्रस्तावित गर्न आवश्यक छ।
हामी भ्रूण anomalies संरचना हेर्न प्राप्त छैन भनेर तुरुन्तै याद गर्नुहोस्, तर placental झिल्ली वा गर्भाशय को hypertonicity जस्तै यस्तो विकार उल्लेख, यो एकदम सम्भव छ। को पाठ्यक्रम, कि अल्ट्रासाउंड एक अस्थानिक गर्भावस्था को उपस्थिति पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
यदि एउटा अल्ट्रासाउंड भ्रूण परिभाषित छैन
वास्तवमा, अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था को 5-6 सप्ताह गर्न सक्छन् देखाउन छैन, तर जो डाक्टर शब्द गलत गरेनन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं 2-3 सप्ताह को अवधि छ भने, डाक्टर सिर्फ ovum भित्र भ्रूण देख्न सक्छौं। डाक्टर जल्दी को भ्रूण प्रारम्भिक गर्भावस्था मा मापन गरिएको छ कि आधार मा गर्भावस्था को समापन गर्न निर्देशन दिन विशेष गरी यदि यो एक महिला को लागि एक गम्भीर तनाव हुन सक्छ। तर तपाईं अझै पनि प्रतीक्षा समय प्रशस्त छ, आतंक को हतार छैन। 10-15 दिन पछि, परिणाम मेल यदि, तपाईं एक निर्णय गर्ने छ, प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्। तर, हामी यो मात्र ती महिला राम्रो महसुस गर्ने लागू सम्झना गर्नुपर्छ। तपाईं दुखाइ बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले, राम्रो डाक्टर विश्वास गर्न पुल हुँदैन। महिला स्वास्थ्य एक प्राथमिकता, किनभने यो आमा एक पटक भन्दा बढी बन्न सक्षम हुनेछ।
पछि हप्तामा अल्ट्रासाउंड
सायद यो विश्वस्त हुनेछ, तर तपाईं gestation5सप्ताह5दिन भने एक केहि फरक तस्वीर मा एक डाक्टर हेर्नुहोस्। अल्ट्रासाउंड को चिकित्सक पत्ता लगाउन ठीक छ हप्ता हुनुपर्छ, अधिक सूचनात्मक हुन सक्छ को fertilized अन्डा को गर्भाशय मा। को ovum, को पहेंलो भाग SAC स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ। को भ्रूण को आकार पहिले नै 6-19 मिमी छ र यसको आफ्नै आन्तरिक अङ्गहरू काम सुरु गर्न पूर्व, Tissues SAC सबै चयापचय समारोह सञ्चालन पहेंलो भाग। यसबाहेक, यसको आकार बारे6मिमी हुनुपर्छ। छैटौं हप्ता मा, डाक्टर पहिले नै सेतो घन्टी, यो भविष्यमा placenta छ हेर्नुपर्छ।
सातौं हप्ता मा स्पष्ट ovum छैन केवल भ्रूण को अस्तित्व निदान छ, तर पनि सेन्सर आफ्नो मुटुको दर र लोकोमोटर गतिविधि कब्जा। आकार ovum 19-27 मिमी छ। मुटुको दर - प्रति मिनेट 150 धडकन।
सबै को पहिले डाक्टर र विकृति केही प्रकारको समावेश भने, यो अझै निदान छैन, कि तर केवल शक उल्लेख गर्नुपर्छ। यसलाई मा5सप्ताह गर्भवती सबैभन्दा uninformative अल्ट्रासाउंड मानिन्छ रूपमा। जो डाक्टर देख्न सकिन्छ, हामी तपाईंले पहिले नै तथापि, शब्द wrongly राख्नु छ भने भन्नुभयो छ, र निष्कर्ष अविश्वसनीय हुनेछ। तर शब्द सही छ भने पनि, त्यहाँ विकास को व्यक्तिगत सुविधाहरू हुन सक्छ। हामी सबै एक पटक प्राप्त अल्ट्रासाउंड डाटा गर्भावस्था को पक्षमा व्याख्या र केही दिनमा अनिवार्य पुष्टि आवश्यक छ हामी भन्न किन छ। यदि एक fertilized अन्डा को गर्भाशय मा फेला परेन, यो अस्थानिक गर्भावस्था कल्पना गर्न सकिन्छ। को ovum यदि आशङ्का anembroniyu (blighted ovum) उत्पन्न हुन सक्छ, र 25 मिमी ovum व्यास को भ्रूण वा 8 भन्दा बढी मिमी को पहेंलो भाग SAC आकार छैन यदि मूल्य पहेंलो भाग SAC छैन थप 20 भन्दा मिमी छ। डाक्टर पनि चलाउन सक्छ , छुटेका गर्भपतन यदि यो भ्रूण मुटुको दर5मिमी भन्दा ठूलो निर्धारण गर्न सक्दैन।
हालसम्म हामी डाक्टर तपाईं को अल्ट्रासाउंड परिणाम बता गर्भावस्था सामान्यतया आय भने गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गरेका छन्। तर, यो मामला मा,5सप्ताह को अवधि, तपाईं समय परीक्षा को लागि, तर पनि डाक्टर मात्र होइन लाग्न सक्छ। दर्ता लागि सोधेर पछि छैन पहिले 10-12 भन्दा हप्ता पहिलो trimester अन्त द्वारा अर्थात् आयोजित गरिनेछ। तर, गर्भावस्था को प्राकृतिक प्रक्रिया उल्लंघन प्रमाण हो कि संकेत को एक नम्बर हो। सामान्यतया, यो अवधि मा एक महिला उनको गर्भावस्था महसुस हुँदैन, त्यसैले तपाईं विभिन्न प्रकृति को कुनै पनि दुखाइ आक्रमण वा अलग्गै छ भने - अमेरिकामा एक डाक्टर को निर्देशन गर्न चलान! गर्भपात को संकेत uterine पर्खाल एक thickening हुन सक्छ। त्यो छ, अत्यधिक भोल्टेज, uterine मांसपेशी hypertonicity को ovum को expulsion धम्की। समय हाम्रो अध्ययन उपयुक्त उपचार पकड र गर्भावस्था सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। दोस्रो साइन thickened myometrium बन्न सक्छ। यो ovum कन्फिगरेसन परिवर्तन र पनि अल्ट्रासाउंड प्रदर्शन डाक्टर को ध्यान देखि उम्कन थिएन। र अन्तमा, सबैभन्दा formidable लक्षण - यो uterine गुहा मा एक खोज, भ्रूण अन्डा नजिक, रगत को एक निश्चित राशि। यस्तो थक्के - खतरा वा पहिले नै गर्भपात निरन्तर एक चिन्ह। रक्त वाहिकाओं को स्रोत साना, भाँचिएको भ्रूण को uterine पर्खाल को कार्यान्वयन मा अन्डा छन्। तर, hematoma आकार मा बढ्छ भने, यो दबाब नै मा fertilized अन्डा राख्न सक्छ।
तसर्थ, हामी पाँचौं हप्ता अल्ट्रासाउंड मा आवश्यक छैन भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई आमा को जीवन र स्वास्थ्य गर्न जोखिम निर्मूल गर्न, त्यहाँ डाक्टर गर्न चासो केही चिन्ताकारक संकेत हो घटनाको लगे गर्नुपर्छ। तपाईं केहि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईं सुरक्षित दशौं सम्म प्रतीक्षा गर्न सक्छन् - बाह्रौँ सप्ताह, र त्यसपछि पहिलो अल्ट्रासाउंड मार्फत जाने र दर्ता गर्न। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ताजा हावा मा फल, पेय भिटामिन र थप पैदल खान भूल छैन। गर्भावस्था - अलार्म लागि एक समय, त्यसैले सबै हेरविचार आफूलाई स्विच गर्न एक समयको लागि आफ्नो परिवार सोध्न, र सुन्दर संगीत सुन्न र चाँडै एक हजार अरूबाट आफ्नो आवाज भेद गर्न सिक्छन् जो आफ्नो बच्चा, संग कुराकानी गर्छन्।
डेलिभरीको लागि मोजा - तिनीहरूले आवश्यक छन् कि?
को फाइदा र बेफाइदा: 40 वर्ष पछि गर्भावस्था।
कसरी परीक्षण बिना गर्भावस्था परिभाषित गर्न
एक उडान गर्भावस्था को समयमा खतरनाक छ कि छैन भनेर
Ovulation कसरी लामो छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ
आफ्नो साइट लाभ वा हानि मा अनलाइन सलाहकार?
भू-- के को विज्ञान? को geologists के? भू-को आधुनिक समस्या
स्थलहरू - आधुनिक जुडनार। को भित्री मा स्थलहरू: विवरण, फोटो र सुविधाहरू प्रयोग
Kamenetz Podolsky, होटल, स्थान, समीक्षा
भ्याकुम क्लिनर Karcher डी एस 5500 अवलोकन
ऐना संग अगाडि ढोका - विश्वसनीय सुरक्षा, तर पनि मात्र होइन आधुनिक र स्टाइलिश डिजाइन छ
VOLTAIRE द्वारा "CANDIDE": उत्पादन विश्लेषण, आधारभूत विचार र विचार। "CANDIDE": सारांश
चिल्लो एम सी-1600: सुविधाहरू, प्रयोग, मूल्य र समीक्षा